PressReader - Kwayedza: 2018-10-05 - Kushandiswa kwemakondomu nemazvo
Kwayedza - 2018-10-05 - Nhau Dzehutano -
Ripe and Ready Kuna Ripe and Ready Ndinoda kukurumbidza pamusoro penyaya yekunonoka kwako kupinda munyaya dzebonde, ramba wakadaro.
K a n a a k a s h a n d i s w a nemazvo, makondomu anobatsira zvikuru mukudzivirira HIV nezvimwe zvirwere zvepabonde.
Tevedzerawo zvinotevera: Kondomu rechirume:
chengeta makondomu echirume panzvimbo yakaoma inotonhorera. Usaachengetere muchikwama chako kana mumota mako nekuti izvi zvinogona kukonzera kuti atsemuke kana kubvaruka.
tarisa pakiti rakaputira kondomu uone kana pasina pakatsemuka uye musi waanopera kushanda kuitira kuti usashandise makondomu anenge ave ekare.
Vhura zvakanaka pakiti yakaputira kondomu uye usashandise mazino ako kana nzara.
Shandisa kondomu idzva kana wave kuda kutanga chimwe chikamu chebonde.
Chengeta makondomu ako panzvimbo yakaoma inotonhorera. Tarisa pakiti rakaputira makondomu uone kana pasina pakatsemuka uye musi waanopera kushanda kuitira kuti usashandise makondomu anenge ave ekare
Pfekera kondomu munhengo yako yakavandika kwemaawa matatu usati watanga kuita bonde. Kondomu iri harikwanise kunyangadika mukati memuviri wako.
Kupfekera kondomu iri, bata ringi remukati maro woripinza mukati usina kuri monya-monya uye panofanira kusara chimwe chidimbu chinganosvika inch imwe chete kunze kuitira kuti rizokwanisa kutatamuka panguva yaunenge uchiita bonde.
Panguva yekuita bonde, iva nechokwadi chekuti ringi yekunze kwekondomu haidzvanyidzirwe kupinda mukati menhengo yako yakavandika.
Kana wapedza kuita bonde, bvisa kondomu rako usati wasimuka.